🥇 ▷ Nalka Telefoonka II, mobilada ayaa la sameeyay si aadan u isticmaalin & # 039; t ✅
Nalka Telefoonka II, mobilada ayaa la sameeyay si aadan u isticmaalin & # 039; t
GPS, shaashadda taabashada, dukaannada app, akhristaha farta-farta, kamarad leh indhaha optics-ka. Xawaaraha Internetka ee Xawaaraha Sare… Waxaas oo dhan waa aasaaska taleefanka casriga ah, xitaa kuwa dhexe ee taabashada kala duwan ee dhaqaalaha. Waxyaabahan ayaa ah kuwa aan tixgelinno mobilada maanta jira, run ahaantii howsha aasaasiga ah ee wixii taleefanka la soo hindisay, kaas oo ah in la waco, aaladaha hadda jira waa qayb labaad. Laakiin mararka qaarkood yaa kale iyo kan ugu yar oo dareemaya culeys iyo jeclaan teleefonka kaga tag guriga, xitaa in muddo ah.
Telefoonka Iftiinka, mobilada ayaa abuuray si aadan u isticmaalin
Waa adeegsiga mobiladan, oo muddo dheer tan iyo markii ay joogsatay inuu taleefan u noqdo noqo qalab aalad badan leh, midka sababa dareenkaas. Mararka qaar waxaan rabnaa inaan kala goyno, laakiin haysashada xarun fara badan oo jeebkaaga ku jirta kama caawinayso waxaanan ku dambaynay inaan ku jawaabno WhatsApp-ka, eegno Facebook, iwm. Taleefoon fudud, taleefan sidaas laakiin aad u yar taas Waxaad u isticmaali doontaa hal shay oo keliya: Wicitaannada.
Qiyaastii xajmiga kaarka deynta – dhab ahaantii ku habboon boorsada, Telefon nalka la sii daayay sanadkii 2017 wuxuu ahaa nooc ka mid ah mobiladaas Malaha WhatsApp, Kuma xirna internetka. Wax barnaamij ah ma aanan haysan nooc kasta ha ahaadee, midna shaashad. Xitaa ma aanan dirin farriimaha SMS. Muxuu sameynayay markaa? Waan helay oo wacayHaa, mudada. Waxay ahayd mobiil sida kuwii ku dhawaad ​​20 sano ka hor, run ahaantii waxay la shaqeysay hal nooc oo shabakad waxayna la timid a 2G GSM SIM kaarka.
Shaashadda e-Ink oo ah kuwa loo yaqaan “Kindle e-Book”
Waxaa loo sameeyay ujeedkan, inay ka caawiso dadka isticmaala inay iska daayaan waxyar oo ka mid ah taleefannadooda casriga ah, Telefoonka Nalka isticmaalay isla lambar taleefan in aad haysato moobaylka caadiga ah, in kasta oo ay runti ahayd wax qaali ah, 150 doollar (€ 138), maaddaama taleefanka labaad uusan fiicnayn.
Laakiin xitaa minimisnimadu waa inay isbeddelaan. Moodel cusub oo cusub, the Light Phone 2 waxay olole ka bilaabeen Indiegogo sanadka 2018 iyagoo raadinaya lacag, keenaya sida ugu cusub ee cusub shaashad midab elektiroonig ah – Teknolojiyad la mid ah tan eBooks-iyo matte dhammaadka ah ee leh inta badan dusha hore ee garoonka. Golaha ayaa awood u leh tusi qoraal intaad u adeegayso sida keyboard toosan si aad ugu dirto farriimaha, Eeg liiska dadka lala xidhiidho, qaylo dhaanta, iwm. Telefoonka Nalka 2 ma isticmaalo Android, laakiin nidaam hawlgal u gaar ah uuraystay astaanta iftiinka taas oo lafteedu la mid tahay la qabsiga Android.
Ma awoodi kartaa inaad noolaato la’aantiin WhatsApp?
Oo tanina waxay umuuqataa inay tahay cabirka saxda ah ee Taleefoonka Laydhka II. Si ka duwan kii ka horreeyay, taleefanka 150-dollar ah oo gabi ahaanba aan lahayn howlo loogu talagalay sida a ” Shoo therapy ‘si loo xidho dareenka Adeegsade taleefankiisa, Nalalka Telefoonka II wuxuu soo jeedinayaa xallin xag-jir ah: waxay ku timaaddaa howlaha khadka tooska ah sidaa darteed waxaad dareemeysaa inaad ku xiran tahay aduunka, laakiin sida ugu yar ee suurtagal ah waa macquul iyo adiga inaad go’aansato kuwa aad ubaahantahay. Ama halkii: si aad u garato kuwa aad u baahan tahay iyo kuwa aadan u baahnayn.
Lagu qalabeeyay 4G LTE, WiFi, GPS iyo Bluetooth, halkii laga isticmaali lahaa barnaamijyada moobiilku wuxuu adeegsan karaa ‘aalado’, laakiin ma jiraan wax qabyo ah oo la socodka wax kasta, inuu ku gudbo liiska aan dhammaadka lahayn ee daabacaadaha ama inuu ku siiyo suulka mar kasta. Ma jiraan waxyaabo ka kooban warbaahinno kala duwan, warar, macaamiil eMail, biraawsar bog ama wax xayeysiis ah. Dukaanno kuma jiraan Google Play Store, sababta “Ma rabno in aad fiirisid taleefankaaga nalka” Sida laga soo xigtay mid ka mid ah hal abuurayaasha, Joe Hollier.
Qalabka ay ku jiraan muusig ku saleysan Spotify API sidaa daraadeed waxaad haysataa qaar ka mid ah liisaska liiska – inkasta oo horeyba u jiray. Iyo halkii Khariidadaha Google ee sharafteeda oo dhan, qalab kale oo leh juqraafi ahaan loo raad raaco taas waxay kuu sheegaysaa talaabo talaabo talaabo Hadaad ubaahantahay inaad aado meel aad ufudud. Waqtigan xaadirka, goobtiisa hore Taleefoonka Nalka wuxuu awoodaa kaliya wicitaano, dir fariimo iyo qaylo-dhaanHaa, laakiin dhamaadka dhamaadka sanadka 2019 ayaa imaan doona howlahaas aan soo sharaxnay.
Qiimo leh $ 350, oo $ 200 ka qaalisan tii hore, Iftiinka Telefoonka II wuxuu horey Mareykanka uga tagay laakiin wuxuu ku suganyahay suuqyada kale. Iyo in kasta oo qaar ka mid ah ay u heli doonaan aalad doqonnimo ah, sida taleefanka labaad wuxuu noqon karaa guul, qaasatan hadaad jeceshahay dhibicda yar ee xad dhaafka ah ee ay maliishiyadu ku leeyihiin shaashadda e-Ink sida inay yihiin eBook